Proxy conflict ဖြစ်နေလို့ပါဗျာ။ - MYSTERY ZILLION
Proxy conflict ဖြစ်နေလို့ပါဗျာ။
Vote Up0Vote Down lincachara April 2011 Posts: 100Registered Users ကျွန်တော်ကUAE မှာအလုပ်လုပ်နေတာပါခင်ဗျာ၊အဲဒီမှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်မြန်မာလူမျိုးသူငယ်ချင်း၄ယောက်အတူကွန်နက်ရှင်1Gbpsလိုင်းကိုယူပြီးrouterနဲ့လိုင်းခွဲပြီးမျှဝေသုံးစွဲကြပါတယ်။သုံးနေတာလည်းကြာပါပြီခင်ဗျာ။ဘာပြဿနာမှလဲထွေထွေထူးထူးမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ကျမှတစ်ယောက်ရဲ့စက်မှာကွန်နက်ရှင်ချိတ်တဲ့အခါမှာErrorတွေတက်ပြီးလိုင်းချိတ်လို့မရပါဘူးခင်ဗျ။Error report တွေပဲတက်နေပါတယ်။code 651,720 တို့Modem ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တို့ဆိုပြီးတော့တက်နေပါတယ်။အဲဒါနဲ့သူ့ရဲ့ ကေဘယ်လ် မှာတစ်ခြားကွန်ပြူတာတွေနဲ့သုံးတော့ကြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး၊အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျ။ဝင်းဒိုး7 OS နဲ့Broadband connection ကိုသုံးတာပါခင်ဗျာ။နောက်တော့Trouble shooter နဲ့လုပ်ကြည့်တော့ proxy conflict ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်using same ip-address at another computer ဆိုပြီးတော့log in လုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျ။ကွန်ပြူတာမှာရှိတဲ့တစ်ခြားဟာတွေအကုန်သုံးလို့ရတယ်၊Local area connection လဲရှိတယ်။sent တို့receive တို့လဲရှိတယ်။ဒါပေမယ့်Registeration your computer on the network, verify user name and password ပြီးရင်errorတက်လာတော့တာပဲဗျာ။အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတော့လို့ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီစဉ်းစားလို့အကြံလေးတွေပေးကြပါလို့အကူအညီတောင်းလိုက်ရပါတယခင််ဗျာ။:mad::mad::mad:	3 မှတ်ချက်များ sorted by Votes
Vote Up0Vote Down aungkyawzeya April 2011 Posts: 219Registered Users အစ်ကိုရေးထားတဲ.အတိုင်းဆိုရင်ရှင်းနေတာပဲလေအစ်ကို၊ Using same ip address in another computer တဲ.။အဲတော. ကျွန်တော်ထင်တာက အစ်ကိုတို.က Workgroup ချိတ်ထားမယ် Router ကပေးတဲ. DHCP လိပ်စာနဲ.သုံးမယ်အဲ.လိုမပာုတ်လားအစ်ကိုယ်:confused:ဒါဆိုရင်တော.ဒီလိုလုပ်ကြည်.ပါလား ၊ Run box မှာ ncpa.cpl လို.ရိုက်ပါပြီးရင် ၊Local Area Connection မှာ Right Click ထောက်ပြီး Properties ကိုရွေးပေးပါ။အဲ.ဒီမှာ Internet Protocol (TCP/IP) ဒါမှမပာုတ် (IPV4)ကိုရွေးပြီး ၊ Properties ကိုသွားပါ၊အဲ.ဒီမှာ Use the Following IP address ကိုရွေးပါ၊တစ်ခြားစက်တွေနဲ.မတူတဲ. IP Address ကိုရွေးပေးပါ။ဥပမာ-သူများစက်တွေက 192.168.1.101 ,192.168.1.102,192.168.1.103 ဆိုရင် အစ်ကိုက 192.168.1.104ကိုရွေးပေးရပါမယ်။ Subnet Mask ကလည်းသူတို.နဲ.အတူတူပဲဖြစ်ရပါမယ်၊ Default Gateway ကိုတော. Router ရဲ. Address 192.168.1.1 လို.ပေးလိုက်ပါ၊ အောက်က DNS Server အတွက် လိပ်စာအတွက်ကတော. Run box ကိုသွားပါ cmd လို.ရိုက်ပါ ၊ နောက်ပြီး ipconfig/all လို.ရိုက်ပါ ၊ အဲဒီ.မှာ DNS Server ဆိုပြီးအောက်ကလိုမျိ ူးပေါ ်ပါလိမ်.မယ် ၊ ိ[ATTACH=CONFIG]1549[/ATTACH]အဲ.ဒီ.ကလိပ်စာတွေကိုမှတ်ပြီး ရိုက်ထဲ.လိုက်ပါ။ ပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါ။ Ok သွားပါလိမ်.မယ် ၊ မOk ရင်တော.လဲနောက်တစ်မျိ ူးကြိ ုးစားကြတာပေါ.အစ်ကိုယ်ရာ :tongue::tongue::tongue:	Vote Up0Vote Down lincachara April 2011 Posts: 100Registered Users အစ်ကိုရေဒီနည်းနဲ့လုပ်ကြည့်တာလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးခင်ဗျာ့။နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးရှိရင်လည်းမစကြပါအုံးဗျာ။တစ်ကယ်လို့နောက်ဆုံးမရလို့ရှိရင် ဝင်းဒိုး အသစ်ပြန်တင်လိုက်ရင်ကောကောင်းသွားနိုင်လားခင်ဗျာ။:confused::confused::confused:	Vote Up0Vote Down xray April 2011 Posts: 171Registered Users router ကို login info တွေ အားလုံးပြောင်းပြီး ip configuration အသစ် ပြန်လုပ်သင့်တယ်။	AddaComment ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းစတင်ရန်
April 2011 lincachara
April 2011 xray
April 2011 Powered by Vanilla